သြဂုတ်လ 2015 | 10 ၏စာမျက်နှာ 55 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 10)
Rockstar က New York တည်နေရာ: လိုအပ်သောတစ် post ကိုထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်နယူးယောက်နယူးယော့အမေရိကန်ကောလိပ်ဒီဂရီနှင့်2+ နှစ်ပေါင်း။ ... ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများအတွက်အသုံးစရိတ်ကိုခြေရာခံ။ more >>
မဖြစ်စလောက်တော်လှန်ရေးတက္ကသိုလ်တည်နေရာ: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် Arlington VA သို့အမေရိကန်တစ်ဦးကနောက်ခံ။ အရည်အသွေးမြင့်မားဆုံးမဩဝါဒပေးဗီဒီယိုများအောင်မြင်ရန်အယ်ဒီတာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်; >> ဒ ... နောက်ထပ်တစ်ခုလုံးကိုထုတ်လုပ်မှုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းများအတွက်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်စီမံခန့်ခွဲရန်
အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းတည်နေရာ၏ Savannah ကောလိပ်: Savannah GA အမေရိကန်အဆိုကိုမီဒီယာဒါရိုက်တာမှအစီရင်ခံ, သင်နှစ်ဦးစလုံး ... နောက်ထပ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်, အလင်းရောင်တာဝန်ရှိသည်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးရိုက်ကူးဖြစ်လိမ့်မည် >>
FOR-တစ်ဦးကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး Solutions ၏ range IBC 2015 မှာ Show ကိုပွဲဦးထွက် Make မှ
လာမည့် IBC ပြရန်မှာ FOR-တစ်ဦးကထုတ်ဖော်ပြသရန်လိမ့်မယ် - Booth ပျေါလှငျ Thunderbolt4 interface ကို Brugherio, အီတလီမှတဆင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း FT-ONE-S က 2000K ကင်မရာ, ပု HVS-100 ရူပါရုံကိုရောနှော၏ဗားရှင်းသစ်နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ HVS-2 ရူပါရုံကိုရောနှောပါဝင်သည် ၎င်း၏အသစ်က FT-ONE-S ကကျစ်လစ်သိပ်သည်း 4K မြန်နှုန်းမြင့်ကင်မရာ, တစ်ဦးအပါအဝင်ရူပါရုံကိုရောနှော၏ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များလိုင်းအပါအဝင်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းနည်းများ, အမျိုးမျိုး ...
ဒါရိုက်တာဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် Editor ကို
နည်းပညာတည်နေရာ၏ Rochester Institute မှ: Rochester, NY အမေရိကန်အသံဖမ်းနှင့်အတူ Comfortable စတူဒီယိုနှင့်တည်နေရာပေါ် :. တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့အမာလ်တီမီဒီယာထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်တာဝန်ရှိသည် ... ။ more >>
Wisycom လေးအသံ Pros နှင့်အတူတည်နေရာအပေါ် Go ဖို့ကမ္ဘာတဝှမ်းတစ်ခရီးစဉ်ယူ
ရောမ, သြဂုတ် 24, 2015 - ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးခေတ်မီ RF ဖြေရှင်းချက်၏ဒီဇိုင်နာနှင့်ဆောက်အမျှ Wisycom စီမံကိန်းများကိုစဉ်အတွင်းစံနမူနာရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များကအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အတော်များများသောအသံပညာရှင်များက၎င်း၏ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အပျနှံ၎င်း၏အလွန်အမင်း-မှတ်လိုင်းမှ Wisycom ကျေးဇူးတင်စကားကြိုက်တတ်တဲ့။ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ထဲကနေစီးပွားဖြစ်ဖို့နဲ့ ...
Sky ၏ over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) တီဗီဝန်ဆောင်မှု NOW ကတီဗီနှင့်မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုက Sky Go ကိုအာဏာဒြပ်စင် software ကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများနဲ့ content စားသုံးမှုမောင်းနှင် clients များရန်၎င်း၏ service ကိုကယ်နှုတ်တော်မူသည်။ ဒြပ်စင်နှင့် Sky အမှုဆောင်အရာရှိတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် All-IP ကို, Multi-Platform ကိုခန့်မှန်းချက်အနာဂတျမှာဆောင်ခဲ့သဖြင့်ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပြတ်သားလမ်းပြမြေပုံထောက်ပံ့! အဆိုပါက Sky အကြောင်းအရာကွင်းဆက်လုံးဝထိရောက်သောနှင့်သည် ...
10 ၏စာမျက်နှာ 55«ပထမဦးစွာ...«89101112 » 203040...နောက်ဆုံး»